Shanghai Airfiltech Co., Ltd.-Shirkadda News-Shanghai Sffiltech Co., Ltd.
Waqtiga: 2018-08-09 Hits: 38
Shanghai Airfiltech Co., Ltd. oo la aasaasay 1996, oo daboolaya aag dabaq ah oo ah 20,000 oo laba jibbaaran laba jibbaaran, waxaanan nahay shirkad soo saare u ah waxyaabaha u habboon deegaanka, inta badan sifeynta hawada iyo alaabta isdaahirinta. Codsiyada ganacsiga, warshadaha iyo hay'adaha. Airfiltech waxay leedahay aqoon isweydaarsi fasal 100,000 ah, iyo horumarsan mini-jilic sare, khadka wax soo saarka shaandhada hawada, qalabka mashiinka faleebo ee la soo dhoofiyay ee Switzerland, mashiinka faleebada ee isku xirnaanta bilaa tooska ah iyo qalabka wax soo saarka miiraha ee xirfadleyda ah, iyo warshaddeenna waxaa sidoo kale lagu qalabeeyaa fasalka koowaad. Mashiinka baaritaanka Metone. Waxaan shahaado si ISO9001-2000 nidaamka maaraynta tayada, iyo nidaamka tayada deegaanka ISO14001-2004. Dhaqdhaqaaqeena sanadlaha ah ayaa ka badan 50 milyan oo doolarka Mareykanka ah.
At Airfiltech, waxaa naga go'an inaan macaamiisha u siino miirayaasha hawada ee naqshadeynta iyo tayada wanaagsan, iyo sidoo kale adeegga qiimeynta koowaad ee iibka kadib.
Wax soosaarkayaga waxaa si weyn loogu isticmaalaa waababka lagu buufiyo rinjiga, qalabka dahaadhka warshadaha, qalabka elektaroonigga ah ee Hi-tech, qalabka saxda ah, bio-pharmaceuticals, nadaafadda cuntada, hawo bixinta iyo nidaamka qaboojinta iyo warshadaha kale sidoo kale.
Ujeeddadeenu waa "Xarunta Macaamiisha, Tayada Koowaad iyo Daacadnimo" si loo dhiso sumcadda iyo adeegyada heerka koowaad.
Shanghai Airfiltech Co., Ltd waxay si wanaagsan uga heshay macaamiisheeda macaamiil ka kala yimid Yurub, Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Afrika, Bariga Dhexe iyo gobol kale oo caalami ah. Waxaan shuraako la ahayn shirkado badan oo Fortune Global 500, sida GM.
Soo dhawow macaamiisha u imanaya inay kala xaajoodaan ganacsiga iyo adeegyada jawiga dhalaalaya, cusub ee dabiiciga ah.